पानीको जोहो गर्ने कि निषेधाज्ञाको पालना ? « News of Nepal
पानीको जोहो गर्ने कि निषेधाज्ञाको पालना ?
पिउनलाई त छैन पानी, हात धुन कहाँबाट ल्याउने ?
एकातिर निषेधाज्ञा अर्काेतिर खानेपानीको अभाव, पछिल्लो समय पाल्पा जिल्ला सदरमुकाम तानसेनबासीले भोगेको साझा समस्या हो यो । पानीको जोहो गर्ने कि निषेधाज्ञाको पालना ? पाल्पा जिल्ला सदरमुकाम तानसेनमा केही दिनयता खानेपानीको समस्याका कारण शुक्रबारदेखि प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई बेवास्ता गर्न बाध्य छन् तानसेनबासी ।
विद्युतीय प्रणालीमा आधारित यहाँको खानेपानी समस्या विगतदेखिकै हो । तर, पछिल्लो समयमा यसले सीमापार गर्दै गएको छ । जीवनसँगै जोडिएको खानेपानी नै नभएपछि तानसेनबासी कोरानाको डरभन्दा पनि पानी पिउन नपाएर मर्ने डरले बढी पिरोलिएका देखिन्छन् ।यहाँका कतिपय टोलमा दुई साताभन्दा बढी भयो पानी आएको छैन । जसका कारण यहाँका ढुङ्गेधारामा दिउँसो मात्र होइन राति पनि भीड लाग्न थालेको छ । नगरबासीले यहाँका वर्षौं पुराना स्रोत तीनधारा, होलाङ्दी, नारायण स्थान, सिन्दुरे आदि मूलबाट मात्र होइन, धेरै टाढा–टाढाबाट पानी बोकेर पिउनुपर्ने बाध्यता अहिले नगरबासीले भोगेका छन् ।जिल्ला सदरमुकाम तानसेनमा दैनिक १० लाख लिटरभन्दा बढी पानी खपत हुने गर्दछ । पानीको चरम अभाव भएपछि सार्वजनिक धारामा कतिखेर पानीको पालो आउँछ भनेर स्थानीयको भीड लाग्ने गरेको हो । यहाँ उपभोक्ताहरू कोरोनाको परवाह नै नगरी लाइनमा बस्ने र ठेलमठेलसमेत गर्ने भएकाले ढुंगेधाराहरू नै कोरोना सार्ने माध्यम त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ । लाइनमा रहनेहरूले, खास गरेर बालबालिकामा मास्क र सामाजिक दूरी कायम नगरेका कारण कोरोना सर्ने डर बढेको हो ।
लामो समयदेखि पानी नआएपछि कतिपयले जारको पानी उपयोग गरेका छन् भने कतिले ट्याङ्करको । होटल व्यवसायी जीवलाल सुवेदी पानीको अभावले निकै समस्या र सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । उपाभोक्ता मीना थापा घण्टौं लगाएर नजिकैको सार्वजनिक धारामा खानेपानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै खानेपानी समस्याका कारण कोरोनाको समेत कुनै प्रवाह नगरी महिला र बालबालिका सार्वजनिक धारामा लाइन लाग्न बाध्य भएको दुखेसो पोख्नुहुन्छ ।पानीको समस्याबाट विशेष गरी डेरामा बस्ने र कर्मचारी पीडित बनेका छन् । सविता जीसी भन्नुहुन्छ– ‘कोरोनाबाट बच्नका लागि साबुनपानीले पटक–पटक हात धुन अनुरोध गरिन्छ, तर यहाँ पिउने पानी नै छैन, कसरी धुने हात ?’तानसेनमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरे पनि यहाँका स्थानीयले खानेपानी अभावका कारण निषेधाज्ञा पूर्णरूपमा पालना गर्न नसकेको स्थानीय प्राध्यापक भेषराज सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
स्थानीयका अनुसार वैशाख लागेसँगै तानसेनमा खानेपानीको अभाव बढेर गएको हो । असमान वितरण प्रणाली, समयमा पानी तान्ने पम्पहरूको मर्मतसम्भार नहुनुका साथै सुख्खा मौसमसँगै नजिकका मूलहरू सुक्दै जाने समस्याका कारण तानसेनमा पानीको आभाव भएको जानकारहरू बताउँछन् । केही हप्ताअघि तानसेनमा कालीगण्डकीको खानेपानी झरिसकेको बताइए पनि अहिलेसम्म उपभोक्ताको घरसम्म पुगेको छैन । यद्यपि उपभोक्ता समितिले भने खानेपानी तान्ने पम्पको मोटर बिग्रेकाले खानेपानीको समस्या आएको र अब विस्तारै सहज हुँदै जाने बताएको छ ।
तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव केशवलाल पौडेलले भुल्केको पानी तान्ने पम्पको मोटर बिग्रिएकाले पहिला बनाउने प्रयास गरिएकाले पानी आउन समय लागेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ पम्प राखिसकेकाले अबका तीन दिनभित्र पहिलेको तालिकाअनुसार नै तानसेनमा खानेपानी वितरण हुने जानकारी दिनुभएको छ ।